Semalt Islamabad Expert - Inona ny tranonkala iray?
Ny 'biby' manan-danja indrindra izay tokony hiheveran'ny olona amin'ny fotoana hahatongavana amin'ny fikarohana fikarohana dia ny spider. Raha efa namaky lahatsoratra ampy tsara lahatsoratra momba ny fanatsarana ny fikarohana ianao , mety ho voamarikao fa ireo mpanoratra dia manondro ireo mpitsikilo mpikaroka matetika. Mety nolazainy ihany koa fa ny asany dia ny mikarokaroka tranonkala ary lasa manazava ny fomba anaovany izany.
Raha toa ianao ka tsy naheno momba ny pasitera fikarohana, dia mety hanontany tena ianao hoe inona ny mpamaky tranonkala. Ny fiezahana hianatra momba azy ireo amin'ny fiorenana tsy tapaka amin'izy ireo dia mety hianjera kely. Ny lahatsoratra manaraka nataon'i Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt, dia hanandrana ny hanenona ny tranonkala mazava tsara ary mety hampidina ny halatra rehetra mety hiantehitra amin'ny sainam-pirenena.
Rehefa mitady tranokalan'ny tranonkala ny milina fikarohana, dia mampiasa programa ordinatera na algorithm izy ireo mba handehanana amin'ny aterineto amin'ny fikarohana ny fampahalalana amin'ny fomba metimolojika sy amin'ny fomba maoderina. Ny programa mandeha ho azy dia mandeha amin'ny anarana maro. Izy io dia mpitsikilo amin'ny web, endritsoratra manamboatra, bot, spider, na ant. Ny fandaharan'asa dia mitarika dingana iray antsoina hoe 'fitifirana tranokala' mba hahazoana antoka fa ny fampahalalana rehetra azo avy amin'ny tranonkala dia ny toetr'andro. Noho izany, toa ny mifanandrify ny "spider".
Ny tanjona voalohany amin'ny andrin-jiolahy dia ny mamorona dika amin'ny pejy tsirairay alehany mba hahafahan'ny milina karoka mitady azy ireo. Ny motera fikarohana dia mampifandray ireo pejy mba hahafahan'izy ireo manome ny mpampiasa azy amin'ny valin'ny fikarohana fohy. Ny fampiasana spider iray hafa dia ny fanamafisana sy ny fanangonana vaovao avy amin'ireo tranonkala mitsidika azy ireo. Manamarina rohy izy ireo ary manamarina ireo fehezan-teny sy teny fanalahidy avy amin'ireo tranonkala. Ny pirinty dia manangona hyperlinks avy amin'ireo pejy tsidihin'izy ireo ary manampy azy amin'ny lisitry ny tranonkala hitsidika. Amin'izany dingana izany, izy ireo ihany koa dia mitaky ny tranokalany voalohany izay nanome ny rohy voalohany.
Ireo fitaovam-pikarohana dia mampiasa ny fampahalalana izay nangonina avy amin'ireo tranonkala mba hizara azy ireo amin'ny pejy faha-25 (valin'ny fikarohana) ho an'ny teny fanalahidy. Io no hiantsoana ny dingana manontolo amin'ny fanatsarana ny fikarohana. Manao izay azo antoka ny fampidirana ireo teny fanalahidy ao amin'ny tranonkala sy ny code-n'ilay pejy fa mahatonga ny asan'ny spider ho mora kokoa. Ny vohikala azo itokisana dia miantoka ny fitsangatsanganana haingana sy mora kokoa. Amin'ny endriny, ny asan'ny spider dia ny hanampy amin'ny famantarana ireo singa izay mila fanavaozana indrindra raha toa ka miasa amin'ny tranonkala mpanjifa. Izany no antony tsy tokony hisalasalan'ny olona amin'ny pasitera ary hanomboka hijery azy ireo ho mahasoa ny tranokala. Tokony hampitsahatra ny fahasitrananao amin'ireo mpitaingin-tsoavina izay mijery ny tranokalanao ianao ary manomboka mitia azy ireo.
Iray amin'ireo orinasa manolotra SEO ho an'ny mpanjifa an-tserasera ny Volacci. Izy io no orinasam-piofanana Drupal SEO izay tena mavitrika ary natokana ho an'ny mpanjifany. Mampanantena izy ireo fa hampiakatra ny lanjany ho an'ny orinasa misoratra anarana amin'ny tolotr'izy ireo. Arakaraky ny tokony ho izy dia manantena ny hahazo tombony amin'izy ireo. Manolotra asa malalaka mihitsy aza izy ireo mandra-pahitan'ny tranonkala tombontsoa lehibe. Raha mitady ny serivisy SEO an-tserasera ianao, ity dia iray amin'ireo orinasa tokony hapetranao Source .